Album - Ivato 21 janvier 2012 Album - Magro 23 janoary Album - Manifestation des familles des prisonniers politiques Rodobe 12/10 - Ny hery tsy mahaleo ny fanahy ! Magro 22/08 - Manàna finoana sy faharetana ary atambaro ny hery Magro 11/08 - Tetezamita tsy misy mpanohitra no hatsangana eto Magro 6/08 - Hijoro hatramin'ny farany izahay na ampitahorina aza Magro 5/08 - Adidintsika ny mamerina Ny Filoha Ravalomanana Recherche	News Report to Sadc Community
Lundi, 20 Mai 2013 19:50 Report to the Southern African Development Community (SADC) on the occasion of the SADC Summit in Maputo on Madagascar Lire ici An'ny Malagasy i Madagasikara fa tsy anareo miaramila !
Lundi, 20 Mai 2013 19:50 Lire ici les points de discussion proposés par le Président Ravalomanana aux sommets de Seychelles :
24july Talking points Seychelles
An agenda for the transition
Lundi, 20 Mai 2013 19:50 Ry Malagasy mpiray tanindrazana,I Mialy sy ny fananany no an’ i Andry TGV fa tsy I Madagasikara na ny vahoakany. Tsy mananjo hanapaka irery izay olona azon’ny Malagasy fidiana izy ary na izy aza tsy mananjo ny hilatsaka ho fidiana araka ny “accord de Cotounou”, izay tsy fantany angamba ary toa iniana tsy ampiharin’ireo mpanelanelana ihany koa. Nanambara ampahibe maso koa izy fa hanao ny faraheriny rehetra tsy hampody ny Filoha Ravalomanana eto an-tanindrazana. Ireo mpanao politika iray vatsy taminy taloha ka mivoy ankehitriny ny hoe tsy mahazo mirotsaka na ilay mpanongana na ny Filoha izay voafidim-bahoaka, dia manao izany koa. Toa an’I Andry TGV dia mitady izay tsy hirotsahan’ny Filoha Ravalomanana ireo satria mahafantatra tsara izy ireo fa tsy hanandanja eo akaikin’ny Filoha Ravalomanana. Izay ihany fa resabe ny sisa. Raha resy lahatra izy ireo fa tsy hisy hifidy ny Filoha Ravalomanana dia hilaza toa antsika hoe milatsaha daholo izay te hilatsaka fa ny vahoaka no misafidy. Tadidio fa niara-nanongam-panjakana tamin’I Andry TGV ireo vondrona politika izay nanao sonia ny tondrozotra ireo ary hotsidihan’ny SADC atsy ho atsy. Tohiny
Lundi, 20 Mai 2013 19:50 Misaotra ireo Malagasy Tia tanindrazana izay nandray anjara tamin’ny fizarana vary tamin’ny mpiara-mitolona, na ireo olona tsirairay na ireo GTT izay nahafoy ho fanampiana ireo namana mpiray tanindrazana. Misaotra ny TMR ihany koa izay nikarakara izany teo an-toerana. Ny andinindinin’ny fitsinjarana ny vola lany dia halefa amin’ny tsirairay. Sary
Fanehoana firaisam-po sy firaisan-tsaina amin’izao fotoana mangidy izao izany hetsika izany fa tsiahivina amintsika Malagasy aty ampita fa tsy ny sakafo ihany no maha ory ny any an-tanindrazana fa ny fahafahana amin’ny ankapobeny. Koa aoka tsy ho adinontsika fa manana adidy izay tsy kely isika aty ivelany hifandray tànana ihany koa amin’ny mpiray tanindrazana amintsika amin’ny tolona izay atao ankehitriny. Aoka tsy hiraviravy tànana isika satria tanindrazana iombonana io. Tsy misy angamba Malagasy tsy manome fanampiana ny fianakaviany saingy tsy àry manana havana aty andilambato daholo ny Malagasy ary tsy manan-danja izany eo anatrehan’ny tsy fahandriam-pahalemana sy ny fahantrana isan-tsokajiny iainan’izy ireo.
Koa dia mamporisika antsika hatrany hahatsiaro an’ny Madagasikara sy ny Malagasy ary hitaona ireo Malagasy namana rehetra mba tsy ho fihatsaram-belatsihy tokoa no iantsoana azy ho tanindrazana.
Page 5 de 62	« Début Préc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant Fin »	ActualitésAPPEL DES LEGALISTESExpressionsLus ailleursLiens